कसरी आफ्नै हातले कुकुर को लागि एक कुत्ताघर बनाउन: विशेषताहरू
प्रश्न: "कसरी गर्न कुकुर लागि कुत्ताघर आफ्नै हातले?" एक निजी घर र chetyrehlapogo पहरादार को लगभग हरेक मालिकको हेरविचार। यो कदम निर्णय भएको, यो, बूथ को स्थानमा, सबै को पहिलो निर्धारण गर्न आवश्यक छ। Doghouse एक अपेक्षाकृत खाली धेरै मा मालिकको घर नजिकै खडा गर्नुपर्छ। यो कुकुर क्षेत्र "नियन्त्रण" र यो भइरहेको छ के को पूर्ण-fledged सदस्य जस्तै महसुस हुनेछ किन, सबैलाई र सबै हेर्न अनुमति दिन्छ। माटो छैन नम जहाँ एक ठाउँमा घर गर्न लिनुहोस्, र हावा सबै पक्षलाई यो झटका छैन। निस्सन्देह, यो तयार बनाएको कुत्ताघर किन्न सजिलो छ, तर एक निर्माण गर्न कसरी आफ्नै हातले कुकुर लागि कुत्ताघर, कुनै विशेष कठिनाइ छन्। सामाग्री क्षेत्र, यसको मौसम र कति समय कुकुर गरिनेछ आफ्नो घर मा निर्भर।
यी अवस्था बूथ आधारमा अन्तरिम वा राम्ररी, मौलिक संरचना रूपमा गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प - कुनै पनि जलवायु छाँटकाँट एक सार्वभौमिक घर।
एक कसरी बनाउने : आफ्नै हातले कुकुर लागि कुत्ताघर निर्माण को चरणमा
निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया Doghouse4मुख्य कदम भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ: आकार, फ्रेम विधानसभा, भित्री र बाहिरी पर्खाल सजावट, छत-छत Windows को उत्पादन को चयन। इन्सुलेशन, waterproofing र छत: अनुरोध थप काम।
कसरी आफ्नै हातले कुकुर को लागि एक कुत्ताघर बनाउन: माप
पशु माप खर्च र कागज को टुक्रा तिनीहरूलाई लेख्न। को withers मा उचाइ निर्धारण, यो 10-15 सेमी टूट पडना - बूथ उचाइ प्राप्त। को स्पेयर भाग चटाई वा मैट को उचाइ सेन्टिमिटर। अर्को सूचकांक कुकुर एक पक्ष गर्न राख्नु लागि हुनुपर्छ र withers गर्न forepaws को सुझाव देखि लम्बाइ मापन, 10-15 सेमी थप्न - संकल्प गहिराई बूथ हुनेछ छ। र प्रवेश सीटें, चौडाइ कुत्ताघर समावेश हुनेछ जो - बुथ दुई क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। इनपुट आयाम: उचाइ भएको withers मा लिन 5-9 सेमी - चौडाई - यो प्रवेश उचाइ, को छाती को चौडाई प्लस 5-8 सेमी हुनेछ। आकार "बेडरूम":। पशुको चाक गर्न कुकुर गरेको नाक को टिप देखि लम्बाइ, प्लस 10 सेमी यो गर्न कसरी प्रश्न जोड दिन्छ कुकुर लागि घर , बूथ को आकार विषयमा आफ्नै हातले। मेरो घर मा कुकुर, सहज न्यानो र छाडा हुनुपर्छ। यसले बसेर, यो छत टाउको, उनको पक्षमा झूट, स्पर्श गर्न प्रयास र बूथ बाहिर जान सक्छ, बिना खुला र सजिलै ठीक खुट्टा तान्न सक्छ गर्नुपर्छ भन्ने हो। तिनीहरूले स्थिर हुनेछ कुकुर: तथापि, "mansions" के छैन।
कसरी आफ्नै हातले कुकुर को लागि एक कुत्ताघर बनाउन: सुझावहरू
स्तर अनुसार कुत्ताघर भविष्य को एक स्केच चित्रकला र सबै आवश्यक उपकरण र सामाग्री तयार गर्नुहोस्। यो softwood प्रयोग गर्न राम्रो छ, तर केहि र छरितो हुन सक्छ। मुख्य काम सामाग्री: बारहरू (आयाम 100x100 र 40x40, 100x50 मिमी), पर्खाल काठको छेकवार, प्लाईवुड, slats, नङ, छत सामाग्री, shingles (छत) glassine (आन्तरिक परिष्करण लागि) बोर्ड, रकवूल (पर्खालहरु इन्सुलेट लागि), घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने कोटिंग। काठको छेकवार थप उत्पादन र छत निर्माण गर्न, पहिलो तल, त्यसपछि फ्रेम पर्खालहरु बनाउन। छत एक छत (एक चदंवा एक पिंजरे अन्तर्गत वा खडा बूथ लागि उपयुक्त छ जो,) र यो भन्दा एक छत द्वारा या त हुन सक्छ बक्स छ। यस मामला मा, एक स्थान therebetween गठन गरिएको छ (mansardochka)। कुनै पनि अवस्थामा, छत माथि जोडेको गर्न सहयोग कुकुर को प्रावधान को मामला मा आवश्यक छ। साथै यो तपाईं राख्न सक्छ जहाँ कुकुर खिलौने, ड्रग्स, पकवान एक प्वाल प्रदान। बूथ तल तिनीहरूलाई जग वा केही फर्श को एक पत्र को रूप मा हुन छ बीच, जमीन संग सम्पर्कमा आउन पर्छ। अन्तर्गत त्यसैले यसलाई जम्मा र मलबे सङ्कलन छैन। बाह्य बूथ सतहहरु एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने समाधान संग साफ गर्नुपर्छ, तर वार्निश, रंग भित्र पर्खालहरु, तपाईं कुकुर विष छैन ताकि, छैन गर्नुपर्छ। थप गर्न सकिन्छ अछूता छत, पर्खाल को waterproofing - तपाईं एक ठोस घर निर्माण भने। एक प्रश्न सबै विशेषताहरू छ: "कसरी आफ्नै हातले कुकुर को लागि एक कुत्ताघर बनाउने?" रेखाचित्र देखि, माल र इच्छा कुकुर घर एक दिनमा निर्माण गरिएको छ!
आफ्नै हात स्पिकर सिस्टम। आफ्नै हातले एक वक्ता सिस्टम कसरी बनाउने?
आफ्नै हातमा सानो घर लग स्नान: को subtleties प्रक्रिया
अखबार ट्यूब देखि शिल्प - सानो रहस्य
रेखाचित्र, कसरी उपकरण बनाउन: आफ्नै हातले फर्नेस तेल
मर्मतका को रिकभरी। के तपाईं जान्नु आवश्यक?
राक्षस संसारमा। जहाँ जंगली कुराहरू हुन् ग्रह, मा रहस्यमय स्थानहरू
एएए बैटरियों: प्रकार र विशेषताहरु
उपकरण हथौडा - के छ र यसको लागि के हो?
एउटा सुन्दर शरीर लागि Ketogenic आहार
यो श्रृंखला "राज्यको।" अभिनेताहरु र सबै भन्दा राम्रो ऐतिहासिक modernity परियोजनाहरूको एक को भूमिका
तर "चार्लोट": एक स्वादिष्ट चकलेट उत्पादन को लागि एक नुस्खा
कम्पनी को उत्पादन को संगठन - कुनै सजिलो कुरा छ